Dowlada Norwey oo 345.8 milyan NOK ugu deeqday Somalia sanadkii 2015. - NorSom News
Home Nyheter/Warcusub Dowlada Norwey oo 345.8 milyan NOK ugu deeqday Somalia sanadkii 2015.
Soomaaliya oo kamid ah 109-ka wadan ee mucaawinada joogtada ka hela wadanka Norwey ayaa sanadkii lasoo dhaafay deeq mucaawino ahaan ah u heshay lacag dhan 345.8 milyan oo gaaraysa ilaa ilaa 40 milyan oo dollar. wax ayna 18 milyan ka yartahay lacagtii ay soomaaliya heshay sanadkii 2014 oo dhameyd 364 oo milyan NOK.
92 % Lacagtan waxaa Soomaaliya loo soo marsiiyaa heyadaha aan dowliga aheyn NGO -yada ka howlgala Soomaaliya iyo wadamada dariska la ah. NGO-yadan oo isugu jira kuwa laga leeyahay Norwey, kuwa hoostaga qaramada midoobey, kuwa wadamo laga leeyahay iyo waliba kuwa maxali ah oo wadanka gudahiisa laga leeyahay.Lacagta u badana waxaa soomaaliya loo sii mariyay NGO-yada laga leeyahay Norwey ee ka howlgala Soomaalia sida Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp, Norges Røde Kors, ADRA, Redd Barna iyo Digni.
Sida aan kasoo xiganay hayada Norwey u qaabilsan mucaawinada ee Norad, lacagtan ayaa loogu talagalay howlahan hoos ku qoran:
Wax ka qabashada Maamulwanaaga =( 132 milyan)
Gar-gaarka bini aadinimo( 87 milyan)
Waxbarashada iyo tacliinta=( 65 milyan)’
Horumarinta dhaqaalaha iyo ganacsiga=( 44 milyan)
Caafimaadka iyo arimaha bulshada=( 9 milyan)
Deegaanka iyo tamarta/energi =3 milyan
howlaha soo haray=5 milyan
Su aasha meesha ku jirta ayaa ah in lacagtan oo aad u badan marka laga eego xaalada uu wadanku ku suganyahay, loo soo isticmaalay sidoo loogu talagalay. Ama la marsiiyay wadadii saxda ahayd. Marar badan ayay hay-adaha soomaaliya ka howlgala ee dowliga ahayd ey ka cowdeen in lacagta ay soo dhaafin xafiisyada NGO-yada ee Nairobi, in badan oo kamid ah lagu isticmaalo safar iyo dulmeer ay madaxda NGO-yada ku meeraan gudaha iyo dibada Soomaalia.
Previous articleNin soomaali ah oo loo xiray fal dil ah oo 2008-dii ka dhacay Oslo
Next articleMalik Yusuf(wiil soomaali ah) oo loo xiray dil uu gaystay 14 sano kahor